Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya oo sheegay in la baaraayo 13 qof oo maanta Amison ku dishay Magaalada Marka |
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya oo sheegay in la baaraayo 13 qof oo maanta Amison ku dishay Magaalada Marka
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya, C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa), ayaa sheegay in baaritaano lagu samayn doono 13 qof oo shacab ah, oo maanta ay Ciidamada Amisom ku dileen Magaalada Marka.
Ciidamada Midowga Afrika, ayaa saakay gudaha u galay xaafadaha Ruuziyo iyo Buulo Eelaay, halkaasoo ay ka gaysteen toogasho ka dhan ah dadka rayidka. Amisom waxay ka carootay gaari booyad ahaa oo shalay galab looga gubay wadada aadda Buufow.
Wasiirka oo la hadlay laanta afka Somaliga ee BBC, ayaa sheegay inaanan la aqbali karin waxyeelo loo gaysto dadka rayidka ah, sidaasi daraadeedna ay Dowladda Somaliya baari doonto. purchase tadalafil, buy zithromax online.
Gudoomiyaha Magaalada Marka, Xasan Cumar Macalin, ayaa Ciidamada Amisom ku eedeeyay in maanta dhibaato badan ay u gaysteen bulshada ku nool Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose Ee Magaalada Marka.
Gudoomiyaha, ayaa tilmaamay in Ciidamada Amisom ay waxyeelo gaarsiiyen rag iyo dumarba, isla-markaana ay falalka ceynkani oo kala ah yihiin kuwo ku soo noq noqday Magaalada Marka, sida uu yiri.
13-ka qof ee lagu laayay Magaalada Marka, ayaa waxaa ku jira laba wiil oo walaalo ahaa, iyadoo tanina noqotay mid ay si weyn u hadalhayan dadka ku dhaqan Magaalada Marka.
Dadka reer Marka, ayaa si weyn kaga dhiidhiyay falka guracan ee ay kula kaceen Ciidamada Amisom, waxayna ku baaqeen in Ciidamada Amisom laga saaro Magaaladaasi.
Dhacdadan, ayaa noqonayso nooceedii ugu khasaaraha badnaa oo dadka rayidka ihi ka soo gaara Ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.